डा. पाण्डे भन्छन्–होम क्वारेन्टाइन अर्थात (एकान्तबास) मा अनिबार्य बसौं « Sansar News
डा. पाण्डे भन्छन्–होम क्वारेन्टाइन अर्थात (एकान्तबास) मा अनिबार्य बसौं
४ चैत्र २०७६, मंगलवार १२:४३
४ चैत, काठमाण्डौं । जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. रवीन्द्र पाण्डेले आफू स्वस्थ्य देखिएपनि कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण भएको हुन सक्ने बताएका छन् ।
डा. पाण्डेले छिमेकी देश भारतदेखि विश्वका जुनसुकै ठाउँबाट आएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरु (स्वदेशी तथा बिदेशी) लाई २ हप्ताको लागि घरमै एकान्तबास (क्वारेन्टाइन) मा बस्न सुझाएका छन् ।
छिमेकी देश भारतदेखि विश्वका जुनसुकै अहिले आफू स्वस्थ देखिएपनि कोरोना संक्रमण भएको हुनसक्छ ।
एकान्तबास नबस्दा त्यो भाइरस पहिले आफ्नो परिवार, आफन्त, नजिकका मित्रहरु, टोलबासी लगायत नजिकका व्यक्तिलाई सर्दछ । कोरोना संक्रमण पराइभन्दा आफन्तबाट सर्दछ । यदि घरको कोठामा एकान्तबास गरेनौं भने आफ्नो परिवार, आफन्त, समाज र राष्ट्रलाई ठूलो पीडा दिएको ठहर्नेछ ।
यस्तो गम्भीर बिषयमा खेलठट्टा नगरौं । जिम्मेवार बनौं । बाहिरबाट कोहि व्यक्ति आफ्नो टोलमा आएको छ भने टोलबासीले पनि अनुगमन गरौँ । एकान्तबास अपनाएको छैन भने उसलाई अनुरोध गरौँ । अनुरोध नटेरेमा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा जानकारी प्रदान गरौँ ।
एकान्तबास नअपनाउदा संसारभर कोरोना संक्रमणले आतंकित बनाएको तथ्य नबिर्सौं । कोरोना भाइरसको फैलाबट तीब्र भएकोले जुनसुकै बेला अकल्पनीय परिस्थिति आउन सक्छ । त्यसको लागि मानसिक तथा भौतिक रुपले तयार बनौं । ज्वरो, खोकी तथा सास फेर्न गाह्रो भए जो कोहि पनि एकान्तबासमा बसौं । सरकारले बाहिरबाट आउने हरेक व्यक्तिको विवरण सम्बन्धित वडा कार्यालय, वडा प्रहरी कार्यालय, टोल सुधार समिति, आमा समुह आदिलाई चेनमार्फत जानकारी प्रदान गरोस ।